Votsirasoa-maty vady sy zanaka efatra : "Tsy misy masoandro miratra ho ahy eto an-tany"
Ranomaso, fahakiviana, izany no hita ami’ny endrik’ity renim-pianakaviana ity, omaly, teny Ankorondrano.
Tao anatin’ny minitra vitsy monja no namoizany ny zanany efatra mianadahy sy ny vadiny.
"Namonjy fanasan’olona izahay enina mianaka ny harivan’ny alakamisy, ora vitsy nialoha io zava-doza io. Nody aloha anefa izy dimy mianaka tokony ho tamin’ny 7 ora hariva teo, raha mbola nijanona tany aho. Ora iray taorian’izay no nisy niteny tamiko fa nirehitra ny tranonay, ary niezaka nody haingana aho. Indrisy, efa maty ny afo vao hita nihohoka niaraka tamin’ireo zanakay ilay vadiko. Olona natanjaka tsara teo, tsy farofy kanefa dia nafoy tampoka", hoy i Votsirasoa, vadin’ilay raim-pianakaviana, maty niaraka tamin’ny zanany efatra, tetsy Ankorondrano, afak’omaly sady latsa-dranomaso.
Avy any Bekily izy mivady ary mpivarotra gazety no asan’izy ireo tamin’ity trano may ity.
"Hofaina 14 000 ariary io trano io. Mba hitady no niakaranay aty an-drenivohitra, nefa izo no nanjo. Tsy mety tony ny foko. Tahaka ny tsy misy masoandro mihiratra ho ahy eto an-tany. Potika tanteraka ny fiainana ary very fanantenana aho", hoy ihany izy. 11 taona, 9 taona, 5 taona ary 3 taona ireo zaza maty. Ankoatra ireo aina nafohy dia tsy nisy noraisina ihany koa ny fanan’izy mianakavy rehetra tao amin’ilay trano. Na ny kopia, ny karapanondro sy ny antontan-taratasy rehetra hafa dia may tao daholo. Tsy mbola fantatra mazava izay anton’ity fahamaizana teny Ankorondrano ny alakamisy teo ity, na dia misy ihany aza ny ahiahy amin’ny hoe ninian’olona natao.